Maalin: Janaayo 27, 2018
Kasımpaşa - Hasköy Tunnel, oo siin doona neefsasho muhiim u ah taraafikada Istanbul, ayaa la hawl galiyay maanta. Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, Raiisel wasaare Binali Yıldırım, wasiirka gaadiidka, arrimaha badda iyo isgaarsiinta Ahmet Arslan, [More ...]
Taraamku wuxuu noqday gaadiidka ugu caansan gaadiidka ee Antalya
Magaalada Antalya, taraamka, oo qaada qiyaastii 90 kun oo qof maalintii, ayaa noqday habka ugu caansan ee gaadiidka. Dadka Antalya waxay caadeysteen nidaamka tareenka Nidaamka tareenka, oo bilaabay inuu ku baahdo gaadiidka magaalada Antalya, wuxuu siiyaa gaadiid aamin ah, raqiis ah oo dhakhso badan. [More ...]
Bixinta lacagta basaska iyo gawaarida rakaabka ee Yekaterinburg
Bixinta by kaarka bangiga iyo codsi mobilada loogu talagalay dadka magaalada iyo dalxiisayaasha u adeegsan doona basas iyo taraam xagaaga soo socda ee Yekaterinburg, mid ka mid ah 11, Russia, kaas oo martigelin doona Koobka Adduunka. [More ...]
Sheekada Tareenka Lumay ee Qaadashada Caanaha ee Anatolia
Dhismaha ayaa ka bilaabmay 1914 iyo 8 bisha 'Khadka Dahabka Madow ee Madowga-' iyo magaca '1950'lerin bilowgii XNUMX'lerle wuxuu si aamusnaan leh ugu lug leeyahay dhammaan macluumaadka ku saabsan tareenka lumay, iyada oo ay jiraan dadaalo ay wado Dawladda Hoose ee Kagithane [More ...]
Iyada oo loo eegayo dareenka musharrixiinta ee degay dalka Turkiga
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) degeen musharax, wada waraaqaha layska rabo ilaa Jimcaha 23.02.2018 TCDD Resources Human Department of Sheegista iyo ka tago Xafiiska Degmada ama Branch (Haydarpasa [More ...]
Erol Arıkan wuxuu ku dhashay 1959 magaalada Gölbaşı, Ankara. Intii uu ka shaqeynayay TCDD, wuxuu sidoo kale ka soo shaqeeyey DMMA, Faculty of Engineering iyo Architecture 1978. [More ...]
doon Turkey ugu weyn "Sultan Alparslan", on January 15 2018 bilaabay in ay u adeegaan ee Tatvan-Van-Tatvan. waddooyinka tareenka transit Turkey-Iran bixinta xiriir via adeegyada ku qariyeen by cusboonaysiinta ee Lake Van doon [More ...]
Maanta taariikhda: 27 Jannaayo 1906 Hejaz Hawlgabka Wadooyinka ...
Maanta taariikhda 27 Jannaayo 1906 Hejaz Maamulka Hawlgallada Tareenka ayaa la aasaasay waxaana dhismaha dhismaha laga kala soocay midba midka kale. Ilaa taariikhdaas, 750 km waxaa lagu rakibay Tareenka Tareenka.